Stendra vs. Viagra: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည် - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေးပညာရေး မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီသတင်း ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ဖျော်ဖြေရေး
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Stendra vs. Viagra: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Stendra vs. Viagra: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
သင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ခံစားနေရလျှင်သင်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ယောက်ျား ၁၅ သန်းမှ ၃၀ သန်းခန့်ရှိသည် အတွေ့အကြုံ ED ။ Stendra (avanafil) နှင့် Viagra (sildenafil) တို့သည်ဆေးဝါးကုသမှုတွင်အသုံးပြုသောဆေးနှစ်မျိုးဖြစ်သည် ED ။ ၎င်းတို့သည် phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE5 inhibitors) ဟုခေါ်သော FDA မှအတည်ပြုထားသောဆေးညွှန်းဆေးများအုပ်စုဝင်ဖြစ်သည်။ ဒီအတန်းထဲတွင်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ ED ဆေးဝါးများ Cialis (tadalafil) နှင့် Levitra (vardenafil) တို့ပါ ၀ င်သည်။
PDE5 inhibitors သည်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်အဆင့်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဤသို့ပြုခြင်းဖြင့်လိင်တံသို့သွေးစီးဆင်းမှုပိုကောင်းလာပြီး၊ ဆေးဝါးများသည်သောက်သုံးခြင်းနှင့်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ PDE5 inhibitors များသည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်တွဲဖက်အလုပ်လုပ်သည်ကိုသတိပြုပါ။
Stendra နှင့် Viagra အကြားအဓိကကွာခြားချက်များမှာအဘယ်နည်း။
Stendra နှင့် Viagra တို့သည် PDE5 inhibitors ဖြစ်ပြီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။
Stendra သည်လက်ရှိအမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်သာရနိုင်သည်။ ဓာတုဗေဒအမည်မှာ avanafil ဖြစ်သည်၊ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးကို avanafil ဟုခေါ်။ Stendra တံဆိပ်အဖြစ်သာမရရှိနိုင်ပါ။
Stendra ကိုလိင်မှုကိစ္စမပြုမီ ၁၅ မိနစ်အလိုတွင် ၁၀၀ မီလီဂရမ်သို့မဟုတ် 200 မီလီဂရမ်ဆေးထိုးအဖြစ်သောက်သင့်သည်။ ၎င်းသည်လိင်ဖျော်ဖြေမှုမတိုင်မီမိနစ် ၃၀ ခန့်တွင် ၅၀ မီလီဂရမ်ဖြင့်ထိုးနိုင်သည်။
Viagra ကိုလိင်မှုကိစ္စမပြုမီတစ်နာရီခန့်ကြာမှသောက်သင့်သည်။ သင်သည် Stendra (သို့) Viagra ကိုသုံးသည်ဖြစ်စေတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာသောက်သင့်သည်။
Stendra နှင့် Viagra အကြားအဓိကခြားနားချက်များ
မူးယစ်ဆေးအတန်း PDE5 inhibitor PDE5 inhibitor
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် / ယေဘုယျအဆင့်အတန်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယေဘုယျ
ယေဘုယျနာမည်ကဘာလဲ? Avanafil (သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်မရရှိသေးပါ) Sildenafil
ဒီဆေးကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ။ တက်ဘလက် (50 mg, 100 mg, 200 mg) တက်ဘလက် (25 mg, 50 mg, 100 mg)
စံသောက်သုံးသောကဘာလဲ? သာဓက - လိင်မှုကိစ္စမပြုမီ ၁၅ မိနစ်အလိုတွင် ၁၀၀ မီဂရမ်ဆေးပြားတစ်လုံး
လိင်မှုကိစ္စမပြုမီမိနစ် ၃၀ ခန့်အလိုတွင် ၅၀ မီလီဂရမ်ဆေးတစ်လုံးတည်း
* တစ်ရက်တွင်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးမယူရန် ဥပမာအားဖြင့် - လိင်မှုမလုပ်ခင်တစ်နာရီအလိုတွင် ၅၀ မီလီဂရမ်တက်ဘလက်တစ်လုံးဖြစ်နိုင်သော်လည်းလိင်လှုပ်ရှားမှုမတိုင်မီမိနစ် ၃၀ မှ ၄ နာရီအနေဖြင့် ၂၅ မီလီဂရမ်မှ ၁၀၀ မီလီဂရမ်အထိနေရာယူနိုင်သည်
ပုံမှန်ကုသမှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ လိုအပ်သကဲ့သို့ လိုအပ်သကဲ့သို့
ဒီဆေးကိုဘယ်သူကပုံမှန်သုံးသလဲ။ အရွယ်ရောက်အထီး အရွယ်ရောက်အထီး
Viagra စျေးနှုန်းသတိပေးချက်များအတွက် sign up ပြုလုပ်ပြီးစျေးနှုန်းပြောင်းလဲသွားသည်ကိုရှာဖွေပါ။
Stendra နှင့် Viagra အားဖြင့်ကုသအခြေအနေများ
Stendra နှင့် Viagra (Viagra ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း) နှစ်မျိုးလုံး၏ကုသမှုတွင်ကုသမှုတစ်ခုသာရှိသည် ယောက်ျားများတွင် ED ။ သို့သော်နှစ် ဦး စလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများ Raynaud ရဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းအဘို့အ Off-label ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Viagra သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုမမှန်ခြင်းကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်။
အခြေအနေ Stendra Viagra
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Raynaud ရဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည် တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည်
အမျိုးသမီးလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုရောဂါ မဟုတ်ဘူး တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည်
လေ့ကျင့်ခန်းစွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်နှင့်လက်တွေ့ပိုမိုဆိုးရွားလာမှုကိုနှောင့်နှေးစေရန်လူကြီးများတွင်အဆုတ်သွေးလွှတ်ကြောသွေးတိုး (WHO အုပ်စု ၁) ကိုလူကြီးများတွင်ကုသမှု မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Viagra လိုမဟုတ်ဘူး။ Revatio (သို့မဟုတ်ယင်း၏ယေဘုယျ sildenafil) ဟုသတ်မှတ်သည့်အခါမှသာလျှင်နေ့စဉ်သုံးကြိမ် 20 mg သောက်သုံးကြပါသည်
Stendra သို့မဟုတ် Viagra သည်ပိုမိုထိရောက်ပါသလား။
TO သို့ ပြန်လည်သုံးသပ်သည် လက်တွေ့လေ့လာမှုများ၏ Stendra Viagra နှင့်အခြား PDE5 inhibitors မှထိရောက်မှုအတွက်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုတွင် Stendra သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသောအားဖြင့်ပိုမိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးသွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချရာတွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းကြောင်းကိုလည်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
နောက်တစ်ခု ပြန်လည်သုံးသပ်သည် လေ့လာမှု၏ Stendra လုံခြုံပြီးထိရောက်သောကြောင်းကောက်ချက်ချပေမယ့်စျေးကွက်အတွက် Stendra ရဲ့ရာအရပျဘို့မသေချာမရေရာခန့်မှန်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ PDE5 inhibitors အားလုံးဟာတူညီကြပြီး Stendra အပြင်လူအားလုံးဟာယေဘူယျအားဖြင့်ရရှိနိုင်တာကြောင့်လူနာအတွက်သိသိသာသာငွေစုနိုင်တဲ့အားသာချက်ကိုပေးတာပါ။ စာရေးသူများကဤသို့ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းမရှိဘဲအေးဂျင့်သစ်သည်စျေးကွက်ဝေစုကိုရှာဖွေရန်အခက်အခဲရှိနိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းခဲ့သည်။
သင့်အတွက်အထိရောက်ဆုံးဆေးကိုသင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေ (များ)၊ သမိုင်းကြောင်းနှင့်သင်သောက်သုံးသည့်အခြားဆေးဝါးများကိုကြည့်ရှုနိုင်သောသင်၏ဆရာဝန်မှသာဆုံးဖြတ်သင့်သည်။
Viagra vs. Viagra နှင့် Stendra ၏ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်မှု
Stendra သို့မဟုတ် Viagra အတွက်အာမခံလွှမ်းခြုံမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ အမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အချို့သောအာမခံကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့အတွက်ပေးရပြီးအချို့ကမပေးချေ။ အချို့အာမခံချက်များတွင်သင်ဖြည့်စွက်နိုင်သည့်ပမာဏအကန့်အသတ်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်၏အာမခံသည် ED ဆေးကိုတစ်လလျှင်ဆေးပြား ၄ လုံးခွင့်ပြုနိုင်သည်။
စံသတ်မှတ်ချက်အရ # 10 တက်ဘလက် Stendra 100 mg (အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်သာရနိုင်သည်) ကို SingleCare လျှော့စျေးကဒ်ဖြင့်ဒေါ်လာ ၆၈၀ ကျသင့်မည်။
sildenafil 50 မီလီဂရမ် (ယေဘုယျ Viagra) ဆေးပြား ၁၀ မျိုးကိုစံညွှန်းဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောဆေးညွှန်းသည်သင်အသုံးပြုသောဆေးဆိုင်ပေါ် မူတည်၍ ဒေါ်လာ ၁၅၀ မှ ၃၀၀ အထိရှိသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်အာမခံဖြင့်ဖုံးလွှမ်း? လွှမ်းခြုံမှုကွဲပြားသည် လွှမ်းခြုံမှုကွဲပြားသည်
ပုံမှန်အားဖြင့် Medicare အပိုင်း D ကိုဖုံးလွှမ်း? မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး
စံသောက်သုံးသော # 10 တက်ဘလက်, 100 မီလီဂရမ် # 10 တက်ဘလက်, 50 မီလီဂရမ်
ပုံမှန် Medicare copay ကွဲပြားသည် (လူနာများသည်အိတ်ထဲမှပေးလေ့) ကွဲပြားသည် (လူနာများသည်အိတ်ထဲမှပေးလေ့)
SingleCare ကုန်ကျစရိတ် $ 680 $ 150 +
Viagra vs. Stendra ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Stendra နှင့် Viagra တို့တွင်အလားတူဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာရှိသည်။ သို့သော်ကြိမ်နှုန်းသည်ဆေးပမာဏနှင့်ကွဲပြားကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာ Viagra 25 mg ကိုသောက်သောလူနာများ၏ 16% သည်ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရသော်လည်း ၁၀၀ မီလီဂရမ်ထိုးသောလူနာများ၏ 28% သည်ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရသည်။
Stendra နှင့်အတူအသုံးများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဖလပ်ခြင်း၊ နှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်နောက်ကျောနာကျင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ Viagra ၏အသုံးအများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဖလပ်ခြင်း၊ နှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဟုတ်တယ် ၅.၁-၁၀.၅% ဟုတ်တယ် ၁၆-၂၈%
ဖလပ် ဟုတ်တယ် ၃.၂-၄.၃% ဟုတ်တယ် ၁၀-၁၉%
နှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်း ဟုတ်တယ် ၁.၈-၂.၉% ဟုတ်တယ် 4-9%
ခါးနာခြင်း ဟုတ်တယ် ၁.၁-၃.၂% ဟုတ်တယ် 3-4%
အစာ ဟုတ်တယ် ၁-၂% ဟုတ်တယ် 3-17%
မူးယစ်ဆေးဝါး ဟုတ်တယ် ၁-၂% ဟုတ်တယ် 3-4%
ပျို့ချင်သည် ဟုတ်တယ် ၁-၂% ဟုတ်တယ် 2-3%
ရင်းမြစ် - DailyMed ( Stendra ), DailyMed ( Viagra )
Stendra နှင့် Viagra ၏မူးယစ်ဆေးဝါး interaction က
Stendra သို့မဟုတ် Viagra သောက်သောလူနာများသည် nitroglycerin ကဲ့သို့နိုက်ထရိတ်ဆေးများကိုဘယ်တော့မှမသောက်သင့်ပါ။ The ပေါင်းစပ် ၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောသွေးပေါင်ချိန်ကိုနိမ့်ကျစေနိုင်သောကြောင့် (အတူတကွအသုံးမပြုသင့်ပါ) ဖြစ်ပါသည်။
Stendra (သို့) Viagra နဲ့ပေါင်းပြီးသွေးဖိအားကိုလျော့ကျစေနိုင်တဲ့ဆေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ ယင်းတို့တွင် alfauzosin၊ terazosin သို့မဟုတ် tamsulosin ကဲ့သို့သော alpha blockers၊ riociguat (အဆုတ်သွေးလွှတ်ကြောသွေးပေါင်ချိန်ကိုကုသရန်အသုံးပြုသောဆေးဝါး) နှင့်သွေးဖိအားဆေးတို့ပါဝင်သည်။ ဤဆေးများကို Stendra သို့မဟုတ် Viagra နှင့်သာသတိထားသင့်ပြီးသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူမှသင့်လျော်သောစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသင့်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်အင်ဇိုင်းများ၏အကူအညီဖြင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်သွားသည်။ ဘုံတစ်ခုမှာ cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) စနစ်ဖြစ်သည်။ CYP3A4 ကိုတားစီးသောဆေးတစ်မျိုးသည်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးကိုမည်သို့ပြုပြင်သည်ကိုတားဆီးခြင်းသို့မဟုတ်နှေးကွေးစေခြင်းဖြင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးကိုစနစ်အတွင်းတည်ဆောက်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ ဆေးသည် A သည်မူးယစ်ဆေးဝါးဘီကိုတားဆီးပါကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌မူးယစ်ဆေးဝါးဘီတိုးပွားလာလိမ့်မည်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပြင်းထန်စွာတားဆီးနိုင်သည်
အားကောင်းသော 3A4 inhibitor ကိုသောက်သောလူနာများသည် Stendra ကိုမသောက်သင့်ပါ။ အလယ်အလတ် inhibitor သောက်သောလူနာများသည် ၅၀ မီလီဂရမ်ထက် ပို၍ မသောက်သင့်ပါ။ ဆရာဝန်ကအတည်ပြုမှသာလျှင်။ အားကြီးသော 3A4 inhibitor ဖြင့်သောက်သောအခါ Viagra ကိုအနည်းဆုံး ၂၅ မီလီဂရမ်ဖြင့်စတင်သင့်သည်။ အကယ်၍ protease inhibitor ritonavir ဖြင့်သောက်ပါက Viagra သည်အနည်းဆုံး ၄၈ နာရီခြား။ ၂၅ မီလီဂရမ်သာသောက်သင့်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်ဆေးအတန်း Stendra Viagra
နိုက်ထရိတ် နိုက်ထရိတ် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Riociguat Guanylate cyclase stimulator ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Terazosin Alpha blockers ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
စသည်တို့ သွေးတိုးရောဂါ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Atazanavir အားကောင်းတဲ့ CYP 3A4 inhibitors ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
စိုင်းထီးဆိုင် အလယ်အလတ် CYP 3A4 inhibitors ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Stendra နှင့် Viagra ၏သတိပေးချက်များ
Stendra သို့မဟုတ် Viagra ကိုမသောက်မီနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။ အချို့သောလူနာများသည် Stendra (သို့) Viagra အတွက်လျှောက်ထားသူမဟုတ်ပါ။ Stendra သို့မဟုတ် Viagra မသောက်မီသင့်နှလုံးသို့မဟုတ်သွေးပေါင်ချိန်ပြproblemsနာရှိပါကသင့်ဆရာဝန်အားမေးမြန်းပါ။
လက်ရှိတွင် Stendra သို့မဟုတ် Viagra သည်နှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်လေဖြတ်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန် (၉၀/၅၀ မမHHGထက်နည်းသော) နှင့်မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်များ (သို့မဟုတ် ၁၇၀ ထက်မကသော) များကဲ့သို့သောနှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုများသောလူနာများတွင် Stendra သို့မဟုတ် Viagra ကိုမသုံးရန်အကြံပြုသည်။ 100 mmHg) နှင့်မတည်မငြိမ် angina နှင့်အတူလူနာ။ အကယ်၍ သင့်တွင်နှလုံးသို့မဟုတ်သွေးပေါင်ချိန်ပြproblemsနာများရှိပါကသင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Stendra သို့မဟုတ် Viagra သည်သွေးဖိအားကိုလျှော့ချခြင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုများကြောင့်နိုက်ထရိတ်ကဲ့သို့သောနိုက်ထရိုဂျင် (nitroglycerin) သို့မဟုတ်ရီယိုဂိုက် (စ်) ကဲ့သို့သောရီယိုဂိုက်တီကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်သူများတွင်မသုံးသင့်ပါ။ Stendra သို့မဟုတ် Viagra နှင့်ပေါင်းစပ်သောအခြားဆေးဝါးများသည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုပါအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည် (မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုဇယားကိုကြည့်ပါ) ။
လိင်တံ၏ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာပုံပျက်သောလူနာများကို Stendra သို့မဟုတ် Viagra ကိုသတိထားပါ။
ရံဖန်ရံခါအချိန်ကြာမြင့်စွာစိုက်ထူခြင်း (၄ နာရီကျော်) သို့မဟုတ် priapism (၆ နာရီထက် ပို၍ ကြာသောနာကျင်သောစိုက်ထူခြင်း) ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ စိုက်ထူခြင်းသည် ၄ ​​နာရီထက်ပိုကြာပါကချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူပါ။ ဤအခြေအနေကိုချက်ချင်းမကုသပါကအမြဲတမ်းပျက်စီးစေနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ရုတ်တရက်အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်နားကြားခြင်းရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးခြင်း (ခေါင်းမူးခြင်းသို့မဟုတ်နားများအူခြင်းများပါလာခြင်း) ရှိပါက Stendra သို့မဟုတ် Viagra ကိုရပ်။ ချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူပါ။
Stendra သို့မဟုတ် Viagra နှင့်အတူအရက်သေစာပမာဏကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤပေါင်းစပ်ခြင်းသည်နှလုံးခုန်နှုန်းတိုးစေခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်ကျခြင်း၊ မူးဝြေခင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
Stendra (သို့) Viagra သည်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများမှမကာကွယ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်အခြားကွန်ဒုံးကဲ့သို့သောအခြားကာကွယ်မှုများကိုလည်းအသုံးပြုသင့်သည်။
Stendra နှင့် Viagra တို့ကိုအမျိုးသမီးများအတွက်မဖော်ပြသောကြောင့်ကိုယ် ၀ န်ရှိဤဆေးများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လက်တွေ့အချက်အလက်မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် Stendra သို့မဟုတ် Viagra ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အကြံပြုခြင်းမရှိပါ။
Viagra vs. Stendra နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
Stendra (avanafil) သည်အမျိုးသားများအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသသော PDE5 inhibitor ဖြစ်သည်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်အတူ၎င်းသည်လိင်တံသို့သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ လက်ရှိတွင်၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်သာရနိုင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသေးသည်။
Viagra (sildenafil) သည် PDE5 inhibitor ဖြစ်ပြီးလူတို့တွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်လိင်တံကိုသွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးပွားစေပြီးလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့် တွဲဖက်၍ သင်သည်စိုက်ထူမှုကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Viagra အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
သင်ခေါ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးအကြောင်းသင်ကြားဖူးပေမည် Revatio Viagra အစား ED အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Revatio သည် Viagra တွင်တူညီသောပါဝင်သည့် sildenafil ပါ ၀ င်သည့်အခြားဆေးဖြစ်သည်။ Revatio အဆုတ်သွေးလွှတ်ကြောသွေးတိုးရောဂါ (PAH) ကုသရန်အသုံးပြုသည်။ Revatio သည် PAH အတွက်သာညွှန်ပြသော်လည်းမကြာခဏသတ်မှတ်သည် တံဆိပ်ကပ်သည် ED အတွက် တစ်ခါတစ်ရံတွင်အာမခံကုမ္ပဏီသည် Viagra ကိုမဖုံးအုပ်ပါကဆရာဝန်သည် Revatio ကိုပုံမှန်အားဖြင့်အာမခံဖြင့်ဖုံးအုပ်နိုင်သည်။
Stendra နဲ့ Viagra အတူတူလား။
အတိအကျတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းတို့သည်အလွန်တူညီပြီး PDE5 inhibitors ဆေးအမျိုးအစားတူဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့တွင်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ကွဲပြားခြားနားမှုအချို့ရှိသည်။
Stendra သို့မဟုတ် Viagra ပိုကောင်းသလား / Stendra သည် Viagra ထက် ပို၍ ထိရောက်ပါသလား။
စမ်းသပ်မှုများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဆေးနှစ်မျိုးလုံးသည်ထိရောက်မှုနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခု Stendra သည်အခြား PDE5 inhibitors များထက်စျေးနှုန်းပိုမိုမြင့်မားသောအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်ရရှိနိုင်သောကြောင့်ဈေးကွက်တွင်နေရာတစ်ခုရှာရန်အခက်အခဲရှိနိုင်သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ Viagra သည် ပို၍ လူကြိုက်များပုံရသည်၊ သို့သော်စျေးတွင်စျေးနှင့်စျေးနိမ့်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောဆေးကိုရှာဖွေရန်တစ်ခါတစ်ရံစမ်းသပ်မှုနှင့်အမှားများပြုလုပ်နိုင်ပြီးသင့်ဆရာဝန်ကသင့်အားဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
ငါကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် Stendra သို့မဟုတ် Viagra ကိုသုံးနိုင်သလား။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဆေးဝါးကိုအမျိုးသမီးများအတွက်အသုံးပြုရန်မညွှန်ပြသောကြောင့်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ဘေးကင်းမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်လေ့လာမှုများမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် Stendra သို့မဟုတ် Viagra ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အသုံးပြုရန်မအကြံပြုပါ။
ငါအရက်ဖြင့် Stendra သို့မဟုတ် Viagra ကိုသုံးနိုင်သလား။
အရက်သေစာတစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ပါတယ်; သို့သော်ထိုသို့ အဆင်ပြေကောင်းရှိနိုင်ပါတယ် သေးငယ်တဲ့ပမာဏပါ။ သင်၏ဆေးကုသမှုပေးသူအားအကြံဥာဏ်တောင်းပါ။
Stendra သည်ဆေးသောက်ပြီးနောက် ၁၅ မိနစ်မှ ၃၀ မိနစ်အကြာတွင်စတင်အလုပ်လုပ်ပြီးခြောက်နာရီအထိကြာနိုင်သည်။
လက်ရှိတွင် Stendra အတွက်ယေဘူယျမရှိပါ။ ယေဘူယျအားရရှိနိုင်ပါက၎င်းကို၎င်း၏ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအမည်၊ avanafil ဖြင့်ခေါ်လိမ့်မည်။
သင်ကောင်တာကျော် Stendra ကိုဝယ်လို့ရမလား။
Stendra ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဆေးညွှန်းဖြင့်သာရနိုင်သည်။ Viagra အမေရိကန်တွင်ဆေးညွှန်းဖြင့်သာရနိုင်သည်။
robaxin 750 အလုပ်လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာလဲ
oxycodone နှင့် hydrocodone ကိုတွဲယူနိုင်သလား
oxycotin နှင့် oxycodone ဘာကွာသလဲ